Banyere Anyị - Zhejiang Gaozhong Plastic Machinery Co., Ltd.
Zhejiang Gaozhong Plastic Machinery Co., Ltd. Emi odude ke China Hose Town -Panan County ， Zhejiang Province, e hiwere na 1991, ụlọ ọrụ tumadi na-arụpụta: plastic corrugated anwụrụ mmepụta akara, plastic asọfe anwụrụ mmepụta akara, eyi / Pee / ịkwanyere anwụrụ mmepụta akara, plastic extruder, traction igwe, winding igwe, plastic pipe ebu na ndị ọzọ dị iche iche nke plastic ígwè. Anyị nwere ụlọ ọrụ anyị, yabụ anyị nwekwara ike ịme ụdị ọkpọkọ plastik niile dịka arịrịọ ndị ahịa si dị.
Companylọ ọrụ ahụ nwere otu ọmarịcha nkà na ụzụ, ma nwee ọnụ ọgụgụ dị elu nke ngwa ọrụ CNC. Anyị abawanyela ọtụtụ akụrụngwa kwa afọ. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ enweela ndị ọrụ 30-40, ndị ọrụ ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ ahụ ihe karịrị afọ atọ .Ha niile nwere teknụzụ, yabụ anyị nwere ike ịnye ndị ahịa nnukwu igwe dị ọnụ ala.
Afọ 29 AHPR.
Ihe karịrị ndị ọrụ 40
ND ỌB EXR EX BANYERE 10
1. Banyere akụrụngwa, GZSJ kwere nkwa ịdị mma nke ọnwa 12.
2. N'oge akwụkwọ ikike ahụ, enweghị mmerụ ahụ na nrụrụ ọrụ na-agbanwe akụkụ mebiri emebi, anyị ga-arụ ọrụ mmezi na ọrụ ntanetị.
3. N'ime ọnwa iri na abụọ, ọ dị mkpa ka onye na-azụ ahịa kwụọ ụgwọ maka imepụta akụkụ nke ike gwụrụ, ma nyekwa ndụ ogologo oge akụrụngwa yana ngwa ọrụ n'efu.
Anyị nwere ihe karịrị afọ 15 nke imewe na-emepe emepe ahụmahụ maka ahaziri adabara plastic igwe ị chọrọ. Zhejiang Gaozhong Plastic Machinery Co., Ltd. bụ a processional ụlọ ọrụ ọkachamara na imewe na imewe nke plastic igwe. Companylọ ọrụ anyị maara nke ọma ma n'ụlọ ma na mba ọzọ maka ngwaahịa dị elu na sistemụ ọrụ zuru oke.
Isi ahịa : Vietnam, India, Egypt, Jordan, Afghanistan, The Middle East, wdg
Anyị abawanyela ọtụtụ akụrụngwa kwa afọ. Anyị na-elekwasị anya na mma na mmepe nke plastic corrugated anwụrụ mmepụta ngwá maka afọ 20. Na-eduga na ụlọ mmepụta technology, ụlọ ọrụ nwetara ngwa ngwa mmepe. The ụlọ ọrụ plastic ígwè na akụrụngwa na-na ọdabara na-amị nile di iche iche nke na akpaaka waya njikota corrugated anwụrụ, waya na cable threading anwụrụ, ji achọ oriọna na lanterns ọkpọkọ, mmiri uzo mmiri na tinyekwa ọjà maka ịsa igwe, ntụ oyi ọkpọkọ, ọgwụ na ahụ ike tube, telescopic pipe wdg .... N'ime ọtụtụ afọ, anyị na-enye ngwaahịa ndị dị elu na GREE, Midea, Haier, Little Swan, na ọtụtụ ụlọ ọrụ maara nke ọma.
Companylọ ọrụ ahụ ga-ekere òkè na ngosi dị iche iche na ụlọ na mba ndị ọzọ kwa afọ, anyị ga-egosikwa usoro mmepụta ọkpọkọ na ihe ngosi ahụ na mmadụ niile nwere ike ịhụ ya. Anyị ga-akọwa otu igwe si arụ ọrụ, gini bụ ihe nkọwa niile.
Ezigbo mma bụ ntụzi aka nke mbọ anyị. Ezi aha bu ihe anyi na-ekwusi ike.
Njikere ịmụtakwu? Kpọtụrụ anyị taa maka a free see okwu!